बलिउडकै ठूला दुश्मनीहरु : यी नायिका एकअर्कालाई देखिसहँदैनन् ! – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on बलिउडकै ठूला दुश्मनीहरु : यी नायिका एकअर्कालाई देखिसहँदैनन् !
नेपालमा मात्रै होइन बलिउडका कतिपय अभिनेत्री एकअर्कालाई देखी सहँदैनन्। ‘टप अभिनेत्री’ बन्ने होडबाजीमा उनीहरूबीच ‘क्याट फाइट’ चलिरहन्छ। फिल्मका अफरदेखि ब्याइफ्रेन्डका कारण एकअर्कालाई मन नपराउने थुप्रै छन् हेर्नुस को को हुन् त ति जो एक अर्काको अनुहार समेत हेर्न चाहदैनन् ।
अभिनेत्री रानी मुखर्जी र ऐश्वर्या रोयबीचको वैमनस्य पनि सबैलाई थाहा छ। यी दुईले नाक मात्र खुम्च्याउँदैनन्, एकअर्कालाई हेर्नै मन पराउँदैनन्। फिल्म ‘बन्टी और बबली’ को सुटिङताका रानी र अभिषेक बच्चनमा बढेको मित्रता यी दुई अभिनेत्री बीचको झगडाको कारण बन्यो। त्यसताका अभिषेक र रानीको अफेयरका समाचार मिडियामा आए। अभिषेककी आमा जया बच्चनले रानीलाई बुहारी बनाउन खोजेको समेत हल्ला बलिउडमा थियो। तर, अमिताभ बच्चनको करबलले पछि अभिषेक र ऐश्वर्याले लगनगाँठो कसे। रानीले निर्माता÷निर्देशक आदित्य चोपडासँग बिहे गरिन्।
दीपिका – कट्रिना
एकअर्कालाई देखेर नाक खुम्च्याउने सूचीमा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र कट्रिना कैफको नाम अग्रपंक्तिमा छ। कुनै समय यी दुई अभिनेत्रीबीच गहिरो मित्रता थियो। तर, दुवैको सम्बन्धमा फाटोको कारण बने, अभिनेता रणवीर कपुर। रणवीरले दीपिका र कट्रिनाबीच कहिल्यै नमेटिने दूरी ल्याएका छन्। बलिउडकर्मीका अनुसार कट्रिनाकै कारण दीपिका र रणवीरको ब्रेकअप भएको थियो। छ वर्षका प्रेम सम्बन्धपछि अहिले कट्रिना र रणवीर पनि छुट्टिइसकेका छन्।
बलिउडकी ‘क्विन’ अभिनेत्री कंगना रनौट सधैँ कुनै न कुनै विवादमा फसिरहन्छिन्। बलिउडमा उनका धेरै कम साथी छन्। प्वाक्क बोल्ने बानीले गर्दा उनी चर्चामा रहिरहन्छिन्। बेला–बेलामा कंगनाका कटु वचनको तारो बन्छिन्, अभिनेत्री प्रियंका चोपडा। दुवैबीचको ‘क्याट फाइट’ जगजाहेर छ। फिल्म ‘फेसन’ को सुटिङका क्रममा दुवैबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। फिल्म हिट भयो। जसको श्रेय कंगलाले आफूलाई दिएकी थिइन् भने आफ्ना कारणले फिल्म हिट भएको प्रियंकाले बताएकी थिइन्। जसले यी दुई अभिनेत्रीबीच दूरी झन् बढाएको थियो।
अभिनेत्री करिना कपुर र प्रियंका चोपडाबीच पनि लामो समयदेखि मनमुटाव छ। फिल्म ‘ऐतराज’ का कारण यी दुईबीच वैरभाव बढेको बताइन्छ। फिल्ममा प्रियंकाको फिल्म समीक्षकदेखि दर्शक तथा फिल्मकर्मी सबैले खूब प्रशंसा गरे। यसो हुँदा करिनाले आफू ओझेलमा परेको महसुस गरिन्। त्यहाँदेखि यी दुई अभिनेत्रीबीच एकअर्कालाई तारो बनाउने खेल सुरु भएको हो।
बलिउडकी ‘दबंग गर्ल’ सोनाक्षी सिन्हा र अभिनेत्री जरिन खान पनि एकअर्कासँग तर्केर हिँड्छन्। अभिनेता सलमान खानको फिल्म ‘रेडी’ बाट उनीहरूबीच मनोमालिन्य सुरु भएको हो। फिल्मको एउटा गीत विमोचन कार्यक्रममा जरिनको छेउबाट गुज्रिँदा सोनाक्षीले उनलाई हल्का धक्का दिएकी थिइन्। त्यहीँबाट दुईबीच ‘क्याट फाइट’ हुन थाल्यो। सोनाक्षीले सलमानसँग फिल्म ‘दबंग’ मा काम गरेकी छिन् भने जरिनले फिल्म ‘वीर’ मा।
← पृथ्वी जयन्ती मनाउने समूहमाथि प्रहरीको हस्तक्षेप, मनीषा कोइराला आ;क्रो;शित → पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, पौष २८ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल